Somali News 06.18.21
By Halima Osman • Jun 19, 2021
Nebraska iyo South Dakota waxay xireen xafiisyada gobolka maanta si ay u sharfaan Fasaxa cusub ee Dowlada Dhexe. Juneteenth waa maalin lagu xuso dhamaadka addoonsiga Mareykanka gudihiisa 19-kii Juun, 1865.
Si kastaba ha noqotee, Gudoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds waxba kama uusan sheegin Juneteenth. Gobolku wuxuu bilaabay inuu aqoonsado fasaxa 2002, hase yeeshe, shaqaalaha gobolku ma helaan maalin mushaar ah.
Somali News 06.08.21
By Halima Osman • Jun 8, 2021
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ma soo warineyso dhimasho dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. 6,072 Iowans ayaa u dhintey tan iyo bilowgii cudurka safka, 229 qof ayaa ku dhintey Gobolka Woodbury.
Waxaa jiray in kabadan 40 kiis oo cusub oo gobolka oo dhan ah iyo laba kale oo katirsan Degmada Woodbury.
Heerka waxtarka ee 14-tijaabada ah ee maxalliga ah wuxuu ka hooseeyaa heerka gobolka oo dhan 2%. Tani waxay muujineysaa faafitaanka bulshada oo hooseeya.
Somali News 06.03.21
By Halima Osman • May 22, 2021
Kiisaska 'COVID-19' waxay ku sii dhacayaan dhammaan saddexda gobol ee Siouxland.
Iowa, heerka qiimeynta tijaabada 14-maalmood wuxuu ka hooseeyaa 3%, taasoo muujineysa faafitaanka bulshada hoose.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay diiwaangelisay toddobo dhimasho oo dheeri ah, iyo 176 xaaladood oo dheeri ah, oo afar kalena ay ku yaalliin Gobolka Woodbury. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu ku boorinayaa qof kasta oo jira 12 ama ka weyn in la tallaalo.